Mashiinka barafka tuubada - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
Barafka tuubada waa nooc ka mid ah barafka cirka isku laaban ee dhexroorkiisa banaanka ka yahay ø22 、 ø29 、 ø35mm dhererkiisuna yahay 25 ～ 42mm. Dhexroorka daloolka badanaa waa ø0 ～ 5mm waana lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo waqtiga sameynta barafka.
Astaamaha: Barafka tuubadu waa mid qaro weyn oo daahfuran oo leh muddo dheer oo keyd ah. Uma badna in ay ku dhalaasho muddo gaaban. Barafka tuubada waa mid aad u qurux badan, waxayna noqon kartaa 100% mid hufan, baaruud ah. Waxay u egtahay mid aad u fiican cabitaanka, cabitaanka.
Codsi: Cunid maalinle ah, cabitaan qaboojiye, cabitaan, khudaarta iyo cuntada badda ka dhig mid cusub, iwm.
3T / maalin mashiinka barafka tuubada
Mashiinka barafka tuubada 5T / maalin
Mashiinka barafka tuubada 10 / maalin
Mashiinka barafka tuubada 20T / maalin
Waa kuwan faa'iidooyinka ugu waaweyn ee mashiinnada barafka ee aan isticmaalo.
Nuqul kii ugu fiicnaa uguna fiicnaa kan ugu fiican.
Ka duwan warshadaha kale ee mashiinka barafka, nidaamyada Herbin Ice waxay u daayeen tikniyoolajiyadda Shiinaha ee saboolka ah ee tikniyoolajiyadda tan iyo 2009. Waxaan soo guurinay tiknoolajiyadda Vogt illaa iyo 2009
Herbin ice Systems waxay ka iibsadeen qaar ka mid ah mishiinada loo yaqaan Vogt ee loo yaqaan P34AL, mid ka mid ah dhirta barafka ee Shiinaha sanadkii 2009. Waan kala qaadnay, oo waxaan soo guurinay dhamaan qeybaha iyo qaabeynta nidaamka. Waxaan u adeegsannaa isla shirkado wax soosaarayaal ah sida Vogt, sida dareeraha heerka dareeraha ee Parker, Bareeraha cadaadiska joogtada ah ee Parker iyo wixii la mid ah. Waxaan soo guurinay Vogt's dareeraha xariifka ah, waxaan ku darnaa dareeraha dareeraha dusha sare ee uumi bixiyaha si looga hortago qulqulka dareeraha ee kombaresarada, waxaan ku darnay kuleyliyaashii hore ee kuleylka si loo hagaajiyo waxtarka nidaamka. Waxaan sidoo kale sameynay horumarin badan oo ku saleysan nuqulkaas si aan uga dhigno mashiinadeena barafka tuubada sida ugu macquulsan.
Khubaradu waxay yiraahdaan mashiinada barafka tuubbada ayaa xitaa ka fiican Vogt hada, maxaa yeelay nidaamka wareejinta saliidayadu wuu ka siman yahay, naqshadeena wayna ka sahlan tahay adeegsaddeena.
Thanks to tikniyoolajiyadeena sare iyo nashqadeynta nidaamka caqliga badan. Mashiinnadayada barafka tuubbada waxay baab'iyaan koronto yar oo loo isticmaalo sameynta qaddar baraf ah.
Tusaale ahaan, aan ku xisaabino mashiinka barafka ee Tube-ka 20T / maalin.
Biyaha kale ee Shiinaha ee la qaboojiyey mashiinnada barafka ee Tube-ka ayaa isticmaala 100KWH koronto ah si ay u sameeyaan 1 tan oo kasta oo baraf ah.
Mashiinnada barafka ee My Tube-ka waxay isticmaalaan 75KWH oo koronto ah oo keliya si ay u sameeyaan 1 tan oo kasta oo baraf ah.
(100-75) x 20 x 365 x 10 = 1825000 KWH. Haddii macaamilku doorto mishiinkeyga barafka ee 20T Tube, wuxuu keydin doonaa 1825000KWH koronto 10 sano gudahood. Immisa ayey le egtahay 1825000KWH koronto ee wadankaaga?
3. Tayo wanaagsan oo leh dammaanad dheer.
80% ka mid ah waxyaabaha ku jira mashiinada barafka ee Tubkeygu waxay la mid yihiin ama la mid yihiin Vogt.
Qaybaha qaarkood waxaa toos looga keenaa USA.
Taasi waxay kuu damaanad qaadeysaa mashiinno baraf oo tayo wanaagsan leh oo leh waxqabadka ugu fiican.
Dammaanadda nidaamka qaboojiyaha waa 20 sano. Haddii nidaamka qaboojiyaha waxqabadkiisa shaqeynaya isbeddelo oo aan caadi ku noqon 20 sano gudahood, annagaa bixin doonna.
Waxaan ubaahanahay in aan ka badnayn 20 maalmood si aan uga dhigno mashiinada barafka ee Tube ka yar 20T / maalin.
Waxaan ubaahanahay in aan ka badnayn 30 maalmood si aan u sameysano mashiinada barafka ee Tube inta udhaxeysa 20T / maalin ilaa 40T / maalin.
Macaamiilku ma sugi doono muddo dheer inuu soo helo mashiinnada barafka ee 'Tube' ka dib bixinta.
Waa kuwan liistada cabbiraadda mashiinnada barafka ee tubbada caadiga ah si aad u tixraacdo.
Mashiinnada barafka ee tuubbada waa la habeyn karaa, iyo cabbirka ayaa ka duwanaan kara si waafaqsan.